DxOMark na-anwale igwefoto n'ihu nke Huawei Mate 40 Pro [Nyocha] | Gam akporosis
Huawei's Mate 40 Pro bụ ekwentị kachasị mma maka ịse foto selfie [Nyochaa]
Obere oge emechara usoro Huawei's Mate 40, ihe mere na October 22, anyị nyochara nyochaa igwefoto n'azu nke DxOMark kwuru banyere ya Nwunye 40 Pro. Ule nyocha ahụ gosipụtara ekwentị a dị ka nọmba 1 na ogo ya, ịbụ onye nyere nsonaazụ kachasị mma na nyocha ya na ule igwefoto.
Huawei, na ama a, na-egosi ọzọ na ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-enye ngalaba kachasị mma na oke njedebe ya.
1 Nke a bụ ihe DxOMark na-ekwu banyere igwefoto n'ihu nke Huawei Mate 40 Pro
1.1 Kedu ka eserese n'ihu vidiyo na igwefoto dị n'ihu?
Nke a bụ ihe DxOMark na-ekwu banyere igwefoto n'ihu nke Huawei Mate 40 Pro
Site na ngụkọta akara nke 104 na ngalaba igwefoto selfie, el Huawei Mate 40 Pro bụ nọmba ọhụrụ na ogo DxOMark, na-eti onye ya na ya kwụ ọtọ P40 Pro site na otu isi na Asus ZenFone 7 Pro site na isi atọ. O mechakwa nweta akara ngosi kachasị elu foto ruo ugbu a, nwere akara 110. Akara a pụtara ìhè dabere na arụmọrụ klaasị n'ọtụtụ agwa yana ntụpọ ole na ole doro anya.
Nsonaazụ ule igwefoto Huawei Mate 40 Pro na DxOMark
Na ule nke ndi otu DxOMark mere, igwefoto dị n'ihu na-enye ọhụụ dị mma nke ọma ọbụlagodi na ọkwa ọkụ dị ala ma na-enyekwa oke dịgasị iche iche, nke bara uru na ọnọdụ ọkụ ọkụ. Nke ikpeazu bara uru karichaa na onodu ndi ozo, bu ebe ihe ngbacha kariri isiokwu a, na ebe ndi ozo di iche.
N'aka nke ọzọ, e kpebiri na agba ndị enwetara na isi ihe mmetụta, nke bụ 13 MP ma na-esonyere ya na lens ToF, dị mma ma mepụtakwa nke ọma, yana ezigbo nguzo ọcha na ọnọdụ ọkụ. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ndị ọzọ enwere ike ịnwe mgbanwe ụfọdụ na nguzo ọcha na akpụkpọ anụ.
The Mate 40 Pro n'ihu igwefoto na-abịa na a dị mfe ofu elekwasị anya ngwọta, ma ọ ka na-agụ nnọọ elu na-elekwasị anya na ule rụrụ. Nnukwu omimi dị omimi pụtara na ndị na-achị achị na-elekwasị anya nke ọma na mgbatị nso na mgbe agbapụrụ n'ogologo aka. Otú ọ dị, nkọwa dị ntakịrị ala na anya nke 120 cm site na osisi selfie, yana isiokwu ndị dị n'ebe dị anya site na igwefoto na ndabere, na-akọwa DxOMark na nyocha ya.
Enwekwara mbelata zuru ezu na ọnọdụ ọkụ dị ala, mana igwefoto n'ihu ka na-ejide nke ọma n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala. N'ebe dị mma, mkpọtụ oyiyi na-achịkwa nke ọma na ọnọdụ niile agbapụMana, na obere ọkụ, P40 Pro na-ewepụta ụda pere mpe karịa nke ọhụrụ Mate 40 Pro.
N'ime ọnọdụ gbara ọchịchịrị, ịnwere ike iji ntanetịime ihuenyo 40, nke na-enye ngosipụta dị mma, mana onyonyo ọkụ na-egosi ụfọdụ vignetting na nguzo ọcha nwere ike ịdị ntakịrị mgbe ị na-agbapụ ọkụ. Ndị nyocha DxOMark hụkwara ụfọdụ ihe onyonyo na eserese oge niile, gụnyere nsụgharị ihu, ihe omume anamorphosis, na ụkọ agba.
Na ọnọdụ eserese, igwefoto nwere ike ịmepụta ihe oyiyi nke ndị nwere mmetụta bokeh dị mma na nzụlite dị nro. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ịnwe ihe omimi miri emi nke ikuku oge, njehie atụmatụ miri emi na-agakarị n'akụkụ akụkụ nke isiokwu ahụ. Yabụ, ọbụlagodi na nyocha nyocha, ọ doro anya na nsonaazụ ya bụ ịmegharị kọmputa kama ịbụ ihe dị adị.
Kedu ka eserese n'ihu vidiyo na igwefoto dị n'ihu?
Nwalere na mkpebi 4K na okpokolo agba 30 kwa nke abụọ (fps), Huawei Mate 40 Pro kwụpụkwara nke ọma na ule vidiyo emere ma, yana ihe 96, jiri akara nke onye ndu ugbu a na ngalaba a, nke bụ Asus ZenFone 7 Pro.
Obere vidiyo nke Selfie na-egosi ihu ọma dị mma n'ọtụtụ ọnọdụ na agba dị ụtọ nke nwere ezi nguzo ọcha. Igwefoto ahụ na-edekọ nkọwa dị mma na ọkụ ọkụ na-enwu gbaa na nke ọkụ ụlọ. Agbanyeghị, enwere ọnwụ nke nkọwa zuru oke. A na-ahụ mkpọtụ na obere vidiyo na ụlọ na obere ọkụ. N'aka nke ya, dị ka ọ dị n'ọnọdụ onyonyo, oghere miri emi nke oghere na-enyere ndị mmadụ aka ilekwasị anya n'ọtụtụ ụzọ.
DxOMark hụkwara ụfọdụ ihe onyonyo vidiyo, dịka ịkọwapụta ụcha na ọkụ dị ala na ụfọdụ ihe ederede na-agagharị, mana igwefoto vidiyo na-arụ ọrụ nke ọma, na-edebe ihe kwụ ọtọ mgbe ijide ekwentị n'aka gị. Ma ọ bụ jee ije mgbe ị na-edekọ. Na nchịkọta, anyị na-eche ihu otu n'ime igwe foto kachasị mma ka ịdekọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei's Mate 40 Pro bụ ekwentị kachasị mma maka ịse foto selfie [Nyochaa]
Esi zere ịchọta ya na Instagram
Nkọwa nke Nokia C1 Plus, Nokia nwere obere njedebe